Ma runbaa in dib-u-dhiska macquulku hadda yahay dahabka?
Backlinks macnaha guud ee laga yaabo in ay tahay qaybta ugu muhiimsan marka la eego dhismaha isku xirka ee Search Engine Optimization (SEO). Waxyaabahani waa in aan isku xirneyn oo dhan loo abuuray si siman - makiinada raadiyaha waaweyn (sida Google laftiisa, iyo sidoo kale Yahoo iyo Bing) waxay siiyaan miisaan ka badan noocyada dhabarka. Qaar ka mid ah kuwa kale, dib u eegis guud oo laga helo bogga internetka ee ganacsigaaga weyn ama blogku had iyo jeer waa xiriirka ugu muhiimsan ee leh awood wayn sida SEO.
Maxay khasab ugu yihiin?
Sidaa daraadeed, waxaad saxan tahay - dib-u-dhiska macnaha ayaa hadda loo aqoonsaday inay yihiin fursado dahab ah oo dahab ah. Dadka qaar ayaa xitaa ugu yeeraya "Qodobada Quduuska ah ee SEO. "Waa maxay sababta ay ugu qanacsan yihiin? Si fudud sababtoo ah haddii aad ka mid tahay kuwa doonaya bogga internetka ama blogka si ay u koraan caan - nooca xiriirkani waa dhab ahaan waxaad u baahan tahay inaad ku raaxaysato horumarkaas.
Maxaa keena dib u celin guud oo macquul ah?
Iyadoo la tixgelinayo ereyada dhan ee bogga "Home Contextual Backlinks" ee miisaanka, aynu isku dayno jebinta ereyga si loogu fahmo faham fiican. First of dhan, a Homepage waa websaytka gaarka ah u xoqaya habka si loo eego content ee site kasta ama blog. Marka labaad, Mawduucyada xiriirka waxaa loola jeedaa in ay tahay in sida caadiga ah loo helo in lagu dhejiyo bogga dhexdiisa - muuqaalka qoraalka qoraalka sida caadiga ah, dib-u-celinta xuduudaha ah uma tagin meel kasta oo liisaska spammy ee jadwalka yar-yar ee laga helo bogga ballaaran. Iyo seddexaad, gadaasha gadaasha ee SEO waxay u taagan tahay xiriir kale (haddii kale, xiriirka soo galaya) ku yaal bogga sadexaad ee xisbiga ama blog iyo tilmaamaya bogagaaga.
Sidee ayay uga shaqeeyaan bogga?
Laga soo bilaabo aragtida kor u qaadida SEO, dhabarka xayiraadaha ayaa si toos ah ugu soo degay bogga intiisa badan waa qaybaha ugu wax ku oolsan ee darawalnimada boggooda ama shabakad kasta oo loo adeegsado raadinta internetka. Waxyaabaha ay tahay in wax walba oo ku saabsan wax ku oolnimada SEO ay tahay mid aad u fudud - dib u eegis xayndaab ah ayaa had iyo jeer ka saraysa hoggaanka Google, sababtoo ah waxay si dabiici ah isugu dhafan yihiin mawduucyada ayna eegaan bayo. Isla mar ahaantaana, xaqiiqda dhabta ah ee dib-u-celinta xaaladahan waxaa lagu abuuray bogga internetka ee shabakadda ama blogka iyaga oo siinaya miisaan ka weyn. Waa maxay sababta? Si fudud sababtoo ah in laga soo dego bogga, dib-u-eegis xayndaab ah ayaa ku sii wadi doona in lagugu wado gaadiidka internetka - waxaa jira hal bog oo kaliya, kaas oo ah "albaab" oo ay soo maraan qof kasta oo soo booqda boggaga ama blog si loo helo bogga kale.
Ugu dambeyntii, maskaxda ku hay in wax kasta oo ku saabsan xiriirka bogga wuxuu u shaqeyn doonaa oo keliya shaqooyinka awoodda badan iyo bogagga shabakada leh PR. Waxaan loola jeedaa in dib-u-celin caadi ah oo miisaankiisu badan yahay mooyaane maadaama kaliya ay si toos ah ugu degtay bogga, laakiin sababta oo ah websiteka oo dhan (ama blog) waa mid qiimo leh Source . Marka, taasi waa qiimaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay si aad uga heshid inta ugu badan ee dib-u-celintaada xuduudahaaga ah - hal qudha oo lafteeda, ama malaha mareegta oo dhan oo lagu qaado miisaanka? Labadaba!